Chelsea vs Luton Town, Man United vs Liverpool & Guud ahaan kulamada maanta iyo caawa laga ciyaari doonto FA Cup – Gool FM
Chelsea vs Luton Town, Man United vs Liverpool & Guud ahaan kulamada maanta iyo caawa laga ciyaari doonto FA Cup
Haaruun January 24, 2021
(London) 24 Jan 2021. Kulammo ka tirsan tartanka faca weyn ee FA Cup-ka ayaa maanta iyo caawa la ciyaari doonaa, waxaana ugu madax fiiqan kulanka kooxda Manchester United ay soo dhoweynayso Liverpool iyo midka ay Chelsea qaabilayso Luton Town.
Chelsea ayaa doonaysa inay horumar ka sameyso tartankan oo ay iska xaadiriso wareegga shanaad ee FA Cup-ka, marka ay garoonkooda Stamford Bridge galabta oo Axad ah ku soo dhoweynayso naadiga Championship-ka ka socota ee Luton Town.
The Blues ayaa 4-0 ku soo dhufatay Morecambe wareeggii saddexaad ee tartankan, halka Luton ay 1-0 ku soo maquunisay Reading, waxaana ay guushaas uga mahadcelinayaan George Moncur.
Tartanka: England – FA Cup
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 03:00 Galabnimo xilliga geeska Afrika
Frank Lampard ayaa la filayaa inuu isbedel badan ku sameeyo shaxdiisa kaddib markii ay Talaadadii qaab ciyaareed hooseeya ku wajaheen Leicester City oo uga adkaatay 2-0.
N’Golo Kante uma badna in halis la gelin doono kulankan, halka Thiago Silva sidoo kale la nasin doono, Olivier Giroud ayaana shaki yar ku jiraa kaddib dhaawac uu ka sheeganayo canqowga.
Andreas Christensen ayaa qalbiga dhexe ee daafaca kala ciyaari kara Kurt Zouma, halka goolhaye Kepa uu shabaqa ku bilaaban doono, Emerson iyo Cesar Azpilicueta ayaana ka ciyaari doona kulankan garbaha daafaca.
Jorginho, Billy Gilmour, Timo Werner iyo Hakim Ziyech ayaa sidoo kale lagu soo bilaabi karaa kulanka maanta.
Kai Havertz iyo Callum Hudson-Odoi oo labaduba qaab ciyaareed niyad jab leh muujiyey kulankii ay wajaheen Leicester ayaa fursad kale la siin doonaa kulanka galabta.
Dhinaca kale Tom Lockyer oo kaarka casaanka ah qaatay kulankii dhowaa ayaa ganaax ku seegi doona kulankan, waxaana booskiisa daafaca buuxin doona Glen Rea.
Martin Cranie iyo Eunan O’Kane ayaa sii joogteyn doona maqnaanshahooda kooxda Championship-ka.
Xaqiiqooyinka Chelsea vs Luton Town:-
>- Kani waa kulankii ugu horreeyey ee dhexmara kooxaha Chelsea iyo Luton tan iyo bishii April ee sanadkii 1994-kii, markaasoo ay Blues ku garaacday kooxda the Hatters lagu naynaaso 2-0 kulan qeyb ka ahaa afar dhammaadka FA Cup-ka, markaasoo ay gaareen finalkoodii ugu horreeyey tan iyo 1970-kii.
>- Luton ayaa la reebay toddobo ka mid ah siddeedii kulan ee ugu dambeeyay ee FA Cup-ka oo ay la ciyaartay kooxaha Premier League, iyadoo garaacday Norwich bishii Janaayo ee 2013-kii.
>- Chelsea ayaa ka gudubtay 51 ka mid ah 53-dii kulan ee ugu dambeeyay FA Cup-ka ee ay la ciyaartay kooxaha ka ciyaara heerka hoose, iyadoo guuldarro kala kulantay Barnsley bishii Maarso 2008 iyo Bradford bishii Janaayo 2015.
>- Tan iyo markii ay guuldarro ka soo gaartay Chelsea semi-finalkii 1993-94, Luton waxa ay gaartay wareegga shanaad ee FA Cup mid ka mid ah 26 kal ciyaareed ee xigay, iyadoo sidaas sameysay xilli ciyaareedkii 2012-13.
>- Weeraryahanka Kooxda Chelsea ee Olivier Giroud ayaa gacan ka geystay 25 gool 32 kulan oo uu FA Cup-ka soo muuqday xirfaddiisa ciyaareed, waxa uu dhaliyey 16 gool isagoo caawiye ka noqday 9 gool, waxaana ku jira 19 gool oo uu ku lug yeeshay 20-kii kulan ee lagu soo bilaabay tartankan isagoo dhaliyey 12 isla markaana dhiibay 7 gool oo kale.
>- Kooxda Chelsea waa ay guuleysatay lix ka mid ah todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartammada FA Cup-ka.
HALKAAN KA AQRISO HORUDHACA KULANKA WEYN EE MANCHESTER UNITED IYO LIVERPOOL:-
Haddaba halkaan hoose ka eeg guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaari doono tartanka FA Cup-ka:-
03:00 Galabnimo Chelsea vs Luton Town
05:30 Galabnimo Brentford vs Leicester City
05:30 Galabnimo Fulham vs Burnley
08:00 Habeennimo Manchester United vs Liverpool
11:00 Habeennimo Everton vs Sheffield Wednesday
FG: Dhammaan saacadaha aan kor ku soo sheegnay waa xilliga geeska Afrika ama saacadda Soomaaliya.
Horudhac: Elche vs Barcelona & Guud ahaan kulamada maanta iyo caawa laga ciyaari doonto horyaalka La Liga
Horudhac: Manchester United vs Liverpool… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka FA Cup-ka ee caawa ka dhacaya Old Trafford)